Yakakurudzirwa mabhuku ekupa paZuva reBhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Zviitiko, Mabhuku
Zuva reBhuku inguva yakakwana yekuti bhuku rive chipo chakakosha. Zvakare, uine akawanda marudzi, unogona kugara uchiwana yakakodzera iye munhu iyeye, kunyanya kana ukaona zvaanoverenga kazhinji.
Nechikonzero ichocho, uye kunyangwe iri gore book fairs and the zviitiko uye zviitiko zvine chekuita nezuva rebhuku haigone kupembererwa, hazvireve kuti haugone kutarisa mamwe ekupa. Unoshinga kuzviita here?
1 Maitiro ekusarudza iro rakakwana bhuku rekupa pazuva rebhuku
1.2 Bvunza shamwari
1.3 Tsvaga mazano
2 Mabhuku atinokurudzira ezuva rebhuku
2.1 Yakareba Petal yeGungwa, naIsabel Allende
2.2 A Perfect Gentleman, naPilar Eyre
2.3 Fariña, naNacho Carretero, kuziva chikamu cheSpain pazuva rebhuku
2.4 Amai vaFrankenstein, naAlmudena Grandes
2.5 Reina Roja, naJuan Gómez Jurado
2.6 1Q84 naHaruki Murakami
2.7 Iri bhuku Mbavha, naMarkus Zusak, rakanakira chipo chebhuku rezuva
2.8 Zuva rekupenga rakarasika, naJavier Castillo
Maitiro ekusarudza iro rakakwana bhuku rekupa pazuva rebhuku
Kana iwe ukaenda kunopa munhu, iwe unoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvausingafanire kufunga, zvakaita semapefiyumu, mbatya kana mabhuku. Chikonzero ndechekuti, kana iwe usingazive munhu iyeye zvakakwana, izvo zvaunovapa zvinogona kunge zvisingaite kuti vafunge.
Naizvozvo, usati warumbidza mabhuku kuti upe pazuva rebhuku, tiri kuzokupa iwe matipi ekuti uzviwane zvakanaka zvakachengeteka.
Iyo ingangodaro iri inoshanda kwazvo yezano ratinokupa iwe nekuti hapana chakafanana nekuona izvo izvo mumwe munhu anoverenga kuti uzive kana bhuku raunorangarira riri iro chairo chairo.
Dzimwe nguva ona mhando yemabhuku aunayo, tarisa bhuku rako remubhedha, nezvimwewo. inokupa zano, asi zvakare taura nezvekuverenga. Nekuti nenzira iyoyo anokuudza zvakanyanya kana kushomeka rudzi rwekunyora rwaanofarira zvakanyanya.
Kana iwe usina kugutsikana nezvaunoona, kana iwe usingakwanise kuwana chero chakajeka, nhanho inotevera ndeyekubvunza mhuri uye / kana shamwari, nekuti vanogona kukutungamira nezve izvo iwe zvaungade zvakanyanya.
Ehe, edza kusasiyiwa wega nezvinotaurwa nemunhu mumwe chete, zvakafanira kuti ubvunze akati wandei uye, nenzira iyoyo, uchajekesa zvirevo zvinozivikanwa uye uchakwanisa kunongedza kutsvaga kwechipo chakanakira kune chakabudirira mhedziso.
Paunenge iwe uchinge waziva mhando yerunyorwa mhando iwe yaunoda, inguva yekutsvaga mabhuku anokodzera mukati mayo. Uye panogona kunge paine mamirioni. Kurasa avo vawaona muchitoro chake chebhuku, kana kuti iwe uchiziva kuti akatoverengera, anazvo kana kuti haazvifarire, uchachengeta mashoma.
Zvakadaro, kune akawandisa. Saka iwe unoda kurairwa uye kurairwa. Dzimwe nguva izvi unozviwana mumabhuku ekuongorora izvo zvinokwezva kutarisa kwako kana mune zvakataurwa nevamwe vaverengi Muzvitoro zvemabhuku rubatsiro irworwo nderwevatengesi vemabhuku vanogamuchira mabhuku uye vanogara vachitarisa kuti vaone kuti vari sei.
Mabhuku atinokurudzira ezuva rebhuku
Uye ikozvino zvaunoziva kusarudza yakanaka yakanaka novel yemunhu iyeye, apa isu tinokusiira iwe a sarudzo kuitira kuti iwe ukurudzirwe kuenderera netsika yekupa mabhuku kure.
Yakareba Petal yeGungwa, naIsabel Allende
Gara muSpanish Yenyika Hondo, iro bhuku rinokutora iwe kuburikidza nenhoroondo yeXNUMXth century. Mariri uchasangana nachiremba uye muridzi wepiano vanofanirwa kubva kuSpain voenda kuValparaíso, kwavanozofanira kujairana nehupenyu hwavo hutsva.
Zvirinani, kusvikira zvinhu zvikaenda zvakare uye, zvakare, vanonzwa kunge havazive zvekuita nehupenyu hwavo.
A Perfect Gentleman, naPilar Eyre
Zvichienderana nechikamu chenhoroondo yeSpain, bhuku rinokuratidza rakasviba kupfuura rimwe guta reBarcelona, ​​ese madhiri ehotera yeRitz, vanhu vanegumi nevaviri, uye hupenyu husingaburitswe zviri nyore asi kune vakawanda vakawana .
Nema protagonists maviri uye neimwewo nyaya yakasarudzika yerudo, nganonyorwa izere nezvakavanzika zvauchazofanira kufumura kusvikira wawana chokwadi, nezve vaviri vacho uye nezve nzanga pachayo.
Tenga iyo nekudzvanya Iyi link.
Fariña, naNacho Carretero, kuziva chikamu cheSpain pazuva rebhuku
Fariña ibhuku rinopokana. Pakaburitswa paive nezvinetso kuti uzviwane, yanga yave kuda kuenda pamudyandigere asi asi pakupedzisira unogona kuiwana zviri nyore uye, kwezuva rebhuku, inogona kuve imwe yeakanyanya kunaka ekupa.
Uye zvakare, icho chikamu chechimwe chikamu cheSpain. Nekuti Fariña anokuudza nhoroondo yemishonga muSpain. Kuburikidza nerondedzero yakanyorwa, iwe uchazoziva izvo zvisina anotaurira nezveGalicia, kutengeswa kwezvinodhaka uye kuti ichiri kushanda sei.
Usagare usina iye.
Amai vaFrankenstein, naAlmudena Grandes
Iyo inoverengeka inotiyeuchidza nezve chikamu chekare cheSpain chine akasiyana mavara kupfuura zvakajairwa, pamwe neyakajairika nyaya mamiriro, senge madhouse. Ikoko iwe unozowana mamwe mavara ayo, pasina kupokana, ari kuzokubata iwe.
Uye ndezvekuti bhuku rinonyura pakati pezvakaitika zvevatambi vaviri kuti vawane ramangwana, pamwe pamwe kana zvakasiyana. Asi nzira iyo nzanga iyo pachayo yenguva iyoyo uye nemararamirwo ayo, kunyanya nematauro mazhinji, inogona kukwezva kutarisisa kwako.
Tenga icho zvisati zvanyanyisa.
Reina Roja, naJuan Gómez Jurado
Pamusoro paReina Roja, iwe zvakare une Loba Negra, chinova chimwe chinhu senge kuenderera kwe "adventures", kuidaidza neimwe nzira, yemutambi mukuru wemabhuku naJuan Gómez Jurado.
Mariri iwe uchave nemukadzi mutikitivha uyo, anoita sekunge aive Sherlock Holmes semukadzi, anokupa iwe unonakidza unonakidza uye imwe yeayo iwe yausingagone kumira kuverenga. Vatsoropodzi vakakurudzira uye, kunyangwe pakutanga zvingave zvakaoma kuverenga, nekuti unozviwana wakanangana nemamiriro ezvinhu iwe ausingazive kuti sei vakasvikako, zvino zvinhu zvinochinja.
Unoda here? Tora pano.
1Q84 naHaruki Murakami
Kuita kuti zvive nyore kwauri kududza, zviri 1984, sezvo iyo 9 uye q muchiJapan zvinotaurwa zvakafanana. Asi bhuku iri zvakare rakavakirwa kuJapan muna 1984, uko kwatinoziviswa kune vatambi vanorarama hupenyu hwekusurukirwa. Asi zvakare hupenyu hwakavanzwa, hwekuti hapana anoziva kana vaviri vakafanana uye vasingazive chaizvo kuti ungatora sei.
Murakami anomira kuve anotsanangudza uye nekunyatsoongorora mavara ake, achikugonesa kuziva bvudzi rega remuviri wake. Naizvozvo, kana iwe uri ongororo uye zvakare uchida kupa inoverengeka pakati penhoroondo, mutambo uye maitiro aOrwell, ichi chingave sarudzo.
Dzvanya apa kuzvitenga.
Iri bhuku Mbavha, naMarkus Zusak, rakanakira chipo chebhuku rezuva
Iyo ndeimwe yemabhuku ekare kubvira payakabuda uye kuti, yezuva rebhuku, rakanakira. Sei? Nekuti zano racho rinotenderera nemabhuku, uye nemusikana asingadi kuti apere akatsva, saka anoedza kuvanunura.
Mavara, zano iro raunoratidzwa kwauri pasina mahombe makuru anoita kuti utaure kuti watoverengera chimwe chinhu chakadai, uye pamusoro pechiratidziro chese icho chichaita kuti uve nacho pamusoro pekuti mazwi anogona sei kuve anokosha zvakanyanya kupfuura zvimwe zvinhu, achaita kukugonesa iwe kuti wakasarudza rakakodzera bhuku.
Unoda here? Tora kubva Iyi link.
Zuva rekupenga rakarasika, naJavier Castillo
Chinhu chinonakidza apo, pachinzvimbo chevatevedzeri vaviri, isu tichava nevanoverengeka, mumwe nemumwe achikutaurira nyaya yavo. Pamusoro pezvo, zvese zvakapfuura nezvazvino zvakasanganiswa, zvichiita kuti chitsauko chimwe nechimwe chikutaurire chikamu chechirongwa ichocho.
Nekuguma kwausingazotarisiri (kana kufungidzira), munyori anokuendesa kunyaya ine zvese izvi: kufungidzira, rudo, kudanana, kutya ... Inogona kuverengerwa yakazvimiririra, asi chokwadi ndechekuti, kana iwe uchida kuti uzive kuti zvese zvinopera sei, zviri nyore kuti iwe uverengewo iro zuva rakarasika rudo. Muchokwadi, unogona kuzvitenga pamwechete muhomwe.
Dzvanya apa kuti uwane
Rakanakidzwa Bhuku reZuva!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Yakakurudzirwa mabhuku ekupa paZuva reBhuku